Iza no olona matanjaka indrindra amin'ny indostrian'ny vokatra fampiroboroboana?
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Iza no olona matanjaka indrindra amin'ny indostrian'ny vokatra fampiroboroboana?
Ny Advertising Specialty Institute® (ASI), ny fikambanana fanabeazana, haino aman-jery ary varotra lehibe indrindra manompo ny indostrian'ny vokatra fampiroboroboana mitentina 20.7 miliara dolara, androany dia nanambara ny lisitry ny Power 50 isan-taona amin'ireo mpanatanteraka manan-kery indrindra amin'ny indostria. Phil Koosed, mpanorina ny BAMKO ary tompon'andraikitra ambony amin'ny tetikady ao amin'ny orinasan'ny ray aman-dreniny, Superior Group of Companies, dia nomena anarana laharana faha-1 amin'ireo olona matanjaka indrindra amin'ny indostria.
Ny ambiny amin'ireo dimy ambony dia manasongadina mpitarika indostrialy manana fiantraikany lavitra. Izy ireo dia: Jonathan Isaacson, Tale Jeneralin'ny Gemline; Jo-an Lantz, tale jeneralin'ny Geiger; Jeremy Lott, filoha/CEO an'ny SanMar; ary Marc Simon, Tale Jeneralin'ny HALO Branded Solutions.
Ny filaharana manokana amin'ity taona ity dia manasongadina ireo mpitarika orinasa marobe izay nahomby tamin'ny fampandehanana ny orinasany nandritra ny areti-mifindra coronavirus. Ny fitarihana an'i Koosed dia tena ilaina amin'ny BAMKO miditra ao amin'ny PPE, izay nanampy betsaka tamin'ny fampiakarana ny fidiram-bolan'ny promo any Amerika Avaratra isan-taona 78.5% ka hatramin'ny $ 194 tapitrisa tamin'ny taona 2020 - ny fiakaran'ny isan-taona lehibe indrindra amin'ireo orinasa mpaninjara 40 ambony indrindra.
"Miarahaba ireo mpitarika rehetra, visionaries ary tompon-daka amin'ny orinasa tafiditra ao amin'ny Power 50 malaza. Izy ireo no tsara indrindra amin'ny tsara indrindra," hoy i Timothy M. Andrews, filoha sy tale jeneralin'ny ASI.
Ny indostrian'ny vokatra promo dia ahitana mpamatsy izay mamokatra, loharano ary/na manonta vokatra sy mpaninjara izay mivarotra sy mivarotra ireo vokatra ireo amin'ny mpanjifa. Ny marika lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa, ​​​​sekoly, hopitaly ary orinasa madinika, dia matetika manome vokatra promo misy logo mba hanaovana dokambarotra ny orinasany na ny hetsika ary hisaorana ny mpiasa sy ny mpanjifa.
Ny ASI dia nanambara ny Counsellor 2021 Power 50 nandritra ny fihaonambe virtoaly ASI Power. Ny hetsika voalohany amin'ny indostrian'ny promo dia nanasongadina ny lahateny nataon'i Richard Montañez, izay nitsangana tamin'ny mpanadio tao Frito-Lay ho filoha lefitry ny PepsiCo.
Nampidirina tao amin'ny 2006, ny Counselor Power 50 isan-taona dia manasongadina ny mpaninjara sy ny mpamatsy mpanatanteraka izay misy fiantraikany lehibe amin'ny tsenan'ny promo.
Niverina tany Kairo ny sidina EgyptAir rehefa avy nandrahona...
WTTC: hahatratra roa ampahatelon'ny fitsangatsanganana ara-barotra alohan'ny...
Loka vaovao momba ny fizahantany kaontinanta natolotry ny Afrikanina ...
Averina averina indray izao ny voanio sesame noho ny Salmonella
Olona 8 no maty tamin'ny fifanosehana tao Houston hip-hop...
Ny antsasaky ny mponina any UK dia manomana fitsangatsanganana maromaro amin'ny taona manaraka